Wonke umuntu kakade uyazi ukuthi ukuba umyeni ephelele. It is ngisho aziwa amadoda, kodwa, ngeshwa, abayivezi ngaso sonke isikhathi unamathela nemithetho. Konke lover kucacile futhi ephelele (lapha amadoda ngcono). Kodwa yini okufanele owesifazane, ukuze akwazi angasho ukuthi lover ephelele?
Ukuze uqonde ukuthi ukuze ajabulise indoda, akusho ukuthi ukufunda ezinye izincwadi ku Sexology noma ukuya kodokotela. Udinga nje ngaqonda ngokwami imithetho embalwa zokuziphatha empilweni futhi uthando:
Okokuqala, owesifazane kufanele uzithanda wena. Okuxakayo nje kuphela omunye wethu othanda yena ngaphezu kwakhe kungaba obunothando olukhulu, futhi ngeke aphula ama-inkululeko zakhe emkhayeni nebudlelwane ukuba uninhibited ngezocansi uyisififane othandweni. Futhi iyolala, hhayi ukuze agcwalise "Umsebenzi zasemshadweni", kodwa bona. Kuphela kowesifazane ophila naye, ngoba esithandwa sakhe, hhayi ngenxa umndeni nezingane, uyazi ukuthi ngokushesha vusa indoda. Ngomqondo onabile, lokho nje konke ukubeka ndawonye futhi sisithinta ohlalayo uthola ukuziphatha kwakhe. Owesifazane othanda yena - lesi iphazili phakade ethandwa abobulili namandla. Kodwa kule nqubo ukusombulula ungaphila ukuphila. Yini kungaba mnandi?
Ukuze liziphathe ubulili uninhibited. Yiqiniso, ubuciko senzo - umqondo lapho bonke ifa Ngezinga elikhulu noma elincane. Yilokho nje uma kuziwa embhedeni, lona wesifazane uqala angabaze futhi ulahlekelwe ngesibindi esibangelwa umba emazwini akhe. Ubulili - kungcono a ukunweba engokwemvelo yothando. Khumbula ukuthi Lingerie eziyengayo ukuba igqoke hhayi umuntu, kodwa bona. Njengalo, ngokuba ukuzethemba kanye ukuzethemba. Ngidinga ukukhuluma kahle, ingezwakali. Ngisho ngaphansi kwaziphi izimo, owesifazane owayenomopho ekhala, ngeke abe unakekelwa kanjani ukuze ajabulise indoda, ngoba izwi elikhulu kufanele - akusiwona ezilingayo nangokuba ezinjengendle. Futhi ekugcineni, khumbula ukuthi kudingeka sazi ukuthi singaphila kanjani ujabule. Khona-ke umlingani wakho beyoba wanelisekile.
Kufanele bakwazi kiss. Musa kiss (okuyilona elisebenzayo futhi kubaluleke kakhulu), okungukuthi ukuqabulana, nokuphathaphathana, touch mnene ukuba enye ne waphikelela ngaphezulu. Ukuze ufunde indlela bajabule a yomuntu ngokuyanga, yaziwa futhi kwabhalwa okuningi ngalawo eziningi. Enye into icacile: akukho ingcindezi futhi ukucindezeleka, ngoba izindebe - zone erogenous, abazi ukubekezelela washesha. Thanda kiss, ukukwenza ngobumnene, ngomoya ophansi kodwa ingawuthinti ke esikhundleni yilezi ayiphulule kushisekela kakhulu, waphikelela ukuthi bathini mayelana izinhloso zakho sina futhi isifiso sokuqhubeka.
Yiba mathupha, kodwa angabonisi ubudlova. Khumbula ukuthi ubudlova - lobuthakathaka. Qala kokudlala wokuqala kwenza futhi okuyenga kuhlanganisiwe. Uzobona ukuthi uzoletha, ikakhulukazi uma ukwenza okokuqala. Khumbula ukuthi ukuba yokwenziwa embhedeni, buthule elinde isiphetho sabo umlingani, uzothola ukwelashwa okufanele. YoMuntu njengengane log. Pleasure, njengoba umthetho, esimweni esinjalo awutholi noyedwa. Iqiniso lokuthi wazi kanjani ukuze ajabulise indoda, udinga ukusisebenzisa ngokwenzuzo umkhuba. Kude abantu bengeke baqonde ukuthi ufuna ukujoyina naye oxhumana obuseduze ngokwengeziwe, uma zihlale nje zibukele i-TV ngesikhathi elinde isinyathelo sokuqala ngakho.
Lwela ukunikeza ubumnandi uzakwethu. Umthetho engcono kuleli cala - yini ukupha ngokwengeziwe kunokulindela ukuthola. Thanda ukuletha ubumnandi umlingani ke, njengoba kuboniswa sexologists, injabulo iyoba namandla kakhulu.
Bakwazi ukuqonda umuntu futhi silwele uqiniseke ukuthi uyakuqonda wena. Umbhede - lena akuyona indawo lapho uhlala khona Amacebo. Mtshele ngokuqondile phakathi esibayeni ayiphulule futhi angiqabule, lokho ofuna kusuka kuye musa. Ngokuzayo une ukuphinda akunakwenzeka.
Khumbula ukuthi into eyodwa - ukwazi ukuthi bajabule indoda kanye nezinye - bakwazi ukukwenza. Lokhu akulona lonke uhlu imithetho yokuziphatha kwabesifazane, kodwa into esemqoka - hhayi ubuningi kodwa izinga. Ngakho-ke sicela ukuzethemba, isibindi uhambe!
Indlela yokwenza "isikhala" izimbiza ngezandla zabo?